DDSI: BIYAHA DHANAHA AH AYAA LA MACAANAYNAYA! | SOMALISTATE.COM
DDSI: BIYAHA DHANAHA AH AYAA LA MACAANAYNAYA!
No comments JIGJIGA – Ismaamulka Soomaalida ayaa ku taamaya mashruuc hirgalintisa dood laga keeni karo oo la sheegay in lagu maacanaynayo biyaha dhanaha ah ee degmooyinka gobolka qaarkood.
Sarkaal u hadlay xukuumada Jigjiga ayaa xusay in dawladiisu ku talo-jirto adeegsiga farsamo casri ah oo biyaha milixda leh lagu sifeeyo oo laga hirgalinayo meelaha biyo yaraanto ka jirto.
Ismaamulka ayaa dhawaan sheegay in warshad lagu sifeeyo biyaha dhanah ah laga hirgaliye degmada Gunagado ee gobolka Jarar.
Dadka aqoonta u leh farsamada casriga ah ee biyaha lagu sifeeyo ayaa sheegay inay aad u adag tahay hirgalinta mashariic noocan oo kale ah marka la fiiriyo xaalada DDSI.
Ugu horeyn warshadaha taayada leh ee noocan ah ayaa ku kici kara lacag aad u badan oo DDSI ayna woodi karin. Waxaa intaa dheer, in loo baahan yahay tamar(energy) joogto ah oo warshaduhu ku shaqeeyaan. Waxyaabaha kale ee lama huraanka ah waxaa ka mid ah injineero xirfad dheerad ah leh oo ka shaqeeya wrashadaha. Qodobadaas iyo kuwa kale oo badan ayaa ka dhigi karaa warshadaha noocan ah kuwa aan xilii dheer ka shaqayn karin gobolka.
Madaxa xafiiska horumarinta biyaha ee Kilika ayaa sheegay in lacag kor u dhaafatay 220 milyan oo birr lagu bixiyey horumarinta biyaha ee meelo gaar ah.
Inkastoo xukuumada Jigjiga sheegto horumar laga sameeye dhanka biyaha ah, haddana waxaa hubaal ah in baahida biyaha ee degaanku ay aad u sareyso iyada oo degmo kasta, tuulooyinka iyo dhulka miyiga ah laga dareemayo biyo-yaraan ama biyo-la’aan.
Dadka sida dhaw ula socda xaalada gobolka ayaa tilmaamaya in hadii si wanaagsan loo maamulo miisaaniyada loogu talagay biyaha degaanka uu xalku soo dhawaan lahaa. Sidoo kale, gobolka kama fayooba musuqmaasuqa iyo maamul-xumada ka jirta waaxyo badan sida Itoobiyada kale.
Waxaa xusid mudan, in xukuumada EPRDF qirtay in musuqmaasuq, ku tagrifalka hantida daweynaha iyo maamul-xumo guud ahaan dalka oo dhan ka jirto; xalna loo raadinayo.
F.g: Xuquuda warka waxaa iska leh Somalistate.com oo soo diyaarisay.